Medical Writings ဆေးပညာစာများ: Triglyceride and Sinus bradycardia နှလုံးခုန် နှေးလွန်းတာ မကောင်းပါ
Triglyceride and Sinus bradycardia အကြောင်းကို မေးချင်ပါတယ်။ ကျမအသက် ၃၇ နှစ်ရှိပါပြီ။ သည်နေ့ပဲ ဆေးစစ်ကြည့်တော့ Triglyceride က ၂၈၁ mg/dl ရှိနေပြီး၊ Sinus bradycardia ရှိနေပါတယ်။ ဆရာ့ကို မေးချင်ပါတယ်။
၁) Triglyceride လျော့စေတဲ့နည်းလမ်း နှင့် မည်သည့် အစားအစာများကို စားရန် နှင့် ရှောင်ရန်။
၂) Sinus bradycardia ရဲ့ ဖြစ်နိုင်တဲ့ဆိုးကျိုး၊ ဘယ်လို ကုသမှုမျိုး လုပ်ရပါသလဲဆိုတာကို သိချင်ပါတယ်။
လက်ကောက်ဝတ် အထက်၊ လက်မဘက်မှာ ကိုယ့်ဖါသာ သွေးခုန်တာကို စမ်းတာနဲ့ သေလောက်အောင် ဆိုးဝါးမှာကို ကာကွယ်ဘို့ အသိ ရနိုင်ပါတယ်။ နှလုံးခုန်နှုန်းဟာ တမိနစ်မှာ ၇ဝ-၈ဝ ရှိတာ ပုံမှန်ပါ။ ၆ဝ ထက်နည်းရင် Sinus bradycardia ခေါ်တယ်။ နည်းပေမဲ့ ဘာမှ မခံစားရဘဲ ၅ဝ လောက်အထိ နည်းမှ ရောဂါလက္ခဏာ ခံစားရသူတွေ ရှိတယ်။ အားကစားသမားတွေမှာ ထုံးစံလို နည်းနေတာတော့ ရောဂါမဟုတ်ပါ။
Myocardial infarction နှလုံးကြွက်သား သွေးမလျှောက် ရောဂါဆိုတာက အလွန့်-အလွန် အရေးကြီးတယ်။ အသက် ကြီးသူတွေမှာ Sick sinus syndrome ရောဂါက ဆိုးတယ်။ ၇ဝ% အောက်သာ ၅ နှစ် ရှင်မယ်။
ဒီရောဂါဟာ တကယ့် အရေးပေါ်ဖြစ်တယ်။ အမေရိကားမှာ တနှစ်မယ် လူ ၅ သိန်းကနေ ၇ သိန်း သေဆုံးနေကြရတယ်။ မသေပေမဲ့ ရောဂါဖြစ်ရသူက နောက်တဆ ရှိသေးတယ်။ သေရသူတဝက်က ဆေးရုံတောင် မရောက်နိုင်ကြဘူး။ Acute Coronary Syndrome, Ischemic Heart Disease, Myocardial Ischemia ဆေစာနဲ့ နာမယ်တွေ အမျိုးမျိုး ခေါ်တယ်။ ဖြစ်ပြီဆိုရင် ရင်ပတ် မတရား-နာတာတာကို Angina pectoris ခေါ်တယ်။ မခံနိုင်အောင်-ချွေးပြန်အောင် နာတယ်။ နှလုံး-ကြွက်သား သွေးမဝလို့ နာတာ ဖြစ်တယ်။ နာတဲ့ နေရာက ရင်ညွန့်ရိုးအထဲကပါ။ မေးရိုး၊ ပခုံး၊ နဲ့ လည်ပင်းဆီကို ဆက်နာနိုင်တယ်။ ရင်ပတ်နာတာက တခြားနေရာမှာဆိုရင် မစိုးရိမ်ပါနဲ့။
ရောဂါလက္ခဏာ ရှိလာရင် ဒါတွေဖြစ်မယ်။
2. Syncope ရုတ်တရက် သတိလစ်တာ၊
3. ခေါင်း မူးတာ၊
4. ခေါင်းထဲ ပေါ့နေတာ၊
6. အသက်ရှူ တိုတာ၊
7. လေ့ကျင့်ခန်း-လှုတ်ရှားမှု လုပ်မရတာ၊
8. အသားအရေ ပြာနှမ်းနေတာ၊
10. အဆုပ်ရောင်တာတွေလဲ တွေ့နိုင်တယ်။
ဆေးစစ်ရင် Electrolyte, Glucose, Calcium, Magnesium, Thyroid function tests, Toxicologic screen, Imaging Studies တွေလုပ်မယ်။ 12-lead ECG နဲ့ သေခြာစေမယ်။
Triglycerides များ-မများ မစစ်ခင် ၈ နာရီကနေ ၁၂ နာရီ အစာမစားဘဲ နေသင့်တယ်။ 150 mg/dL အောက်သာရှိတာ ကောင်းတယ်။ ၁၅ဝ ကနေ ၁၉၉ ဆိုရင် သတိထားရတော့မယ်။ ၂ဝဝ ကနေ ၄၉၉ အထိ မကောင်းဘူး။ ၅ဝဝ ကျော်ရင် အန္တရာယ် ရှိနေပြီ။
Asparaginase (လူကီးမီးယား) ဆေး၊ Fenofibrate, Gemfibrozil, Clofibrate, Statin (ကိုလက်စထော) ကျဆေး၊ Nicotinic acid ဗီတာမင် ဘီ-၃ နဲ့ ဗီတာမင် စီ တွေ သောက်နေသူတွေ၊ အဆီစားနည်းသူတွေ၊ လည်ပင်းကြီး-ဟော်မုန်း များသူ၊ အာဟာရချို့တဲ့သူ၊ အစာ မစုပ်ယူနိုင်တဲ့ ရောဂါ ရှိသူတွေမှာ Triglyceride နည်းနေတာ တွေ့ရမယ်။
အပူချိန်-နည်းတာ၊ သကြားဓါတ်-နည်းနေတာ၊ အအိပ်ပျက်-ရောဂါ၊ ဆုံဆို့နာ၊ လေးဘက်နာ၊ နှလုံးကြွက်သားရောင်ရောဂါ၊ ပတ်ဝန်းကျင်-အဆိပ်သင့်တာ၊ ဓါတ်ဆား-မညီမျှတာ၊ ရောဂါပိုးဝင်တာ၊ သကြားဓါတ်-နည်းတာ၊ လည်ပင်းကြီး-ဟော်မုန်း-နည်းတာ၊ ဦးနှောက်-ဖိအား များတာတွေကြောင့်လဲ ဒီရောဂါ ဖြစ်နိုင်တယ်။
ရောဂါလက္ခဏာ မပြသူတွေအတွက် ဆေးပေးဘို့ မလိုပါ။ ဓါတ်ဆား-မမျှတာမျိုး ရှိနေရင် ပြင်ပေးရမယ်။ Hypothermia ကိုယ်ပူချိန် နည်းတာကြောင့် ဖြစ်ရတာဆိုရင် ပြန်ပြီး နွေးအောင်လုပ်ရမယ်။ ရောဂါပိုး ဝင်ရာကနေ ဖြစ်သူတွေကိုတော့ Permanent Pacing အမြဲ လုပ်ပေးရတယ်။
Sick sinus syndrome ဖြစ်သူတွေက Atropine ပေးရင် ခဏဘဲ သက်သာလို့ Pacemaker ထည့်ပေးရတယ်။ Atropine ဆေးကို သွေးပြန်ကြောထဲ ထိုးပေးရင် လောလောဆယ် သက်သာမယ်။ Atropine လူကြီးဆိုရင် 0.5-1 mg IV or ET q3-5min up to3mg total (0.04 mg/kg) နဲ့ ကလေးတွေမှာ 0.02 mg/kg/dose IV, minimum of 0.1 mg ပေးတယ်။
• ရင်ပတ် နာလွန်းတာအတွက် ဘိန်းပါတဲ့ Morphine sulfate ဆေးနဲ့သာ သက်သောစေနိုင်တယ်။
• မတည်ငြိမ်တဲ့လူနာကို Cardiac monitor နှလုံး-စောင့်ကြည့်စက် နဲ့ IV line အကြောဆေး သွင်းပေးထားရတယ်။ အောက်စီဂျင်လဲ ပေးမယ်။ လိုအပ်ရင် Endotracheal intubation လည်ချောင်းထဲ ကရိယာ ထည့်ပေးထားမယ်၊
• Aspirin (အက်စပရင်) ကြောင့် သေဆုံးတာကို ၂ဝ% လျော့စေနိုင်တယ်။
• Nitroglycerin, Thrombolytic agents, Heparin, Beta blockers နဲ့ Calcium channel blockers ဆေးတွေ သုံးတယ်။
• Pulmonary angioplasty ဆိုတာလဲ လုပ်ပေးနိုင်တယ်။
• လိုသေးရင် Transcutaneous အရေပြားအောက်ဖြစ်ဖြစ် Transvenous Pacing သွေးကြောကနေဖြစ်ဖြစ် စည်းချက် မှန်စေတာ လုပ်ပေးပါမယ်။
Triglyceride levels ဘယ်လို ချမလဲဆိုတာ စိန်ခေါ်မှု (ချဲလင့်ခ်ျ) ဘဲ။
5. ကိုယ်လက်-လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ပါ၊
Cholesterol (ကိုလက်စထော) http://dts-medicaleducation.blogspot.in/2012/06/cholesterol.html
Cholesterol Quiz (ကိုလက်စထော) အမေး-အဖြေ http://dts-medicaleducation.blogspot.in/2012/12/cholesterol-quiz.html